Semalt: समाचार वेब स्क्र्यापि Tool उपकरण
अन्य वेबसाइटहरुबाट समाचार स्क्र्यापिंग ती प्रयोगकर्ताहरुको लागी एक प्रभावकारी रणनीति हुन सक्छ जो वर्तमान घटनाहरुको विश्लेषण गरी समयको अमूर्त राख्न चाहान्छन्। नेटमा लाखौं समाचार साइटहरू छन् जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूलाई आवश्यक जानकारी मोनिटर गर्न सक्छन्। केहि अवस्थाहरूमा, तिनीहरूले विशेष सामग्रीहरू, कम्पनीहरू वा व्यक्तिहरू बारे लेख जस्तो वेबसाइट सामग्री स्क्र्याप गर्न सक्दछन्। तिनीहरू मध्ये केहीलाई वेब सामग्रीबाट अन्तर्दृष्टि निकाल्न आवश्यक पर्दछ। यद्यपि समाचार वेबसाईटहरूमा बहु पृष्ठहरू छन्, जुन विश्लेषण र मैन्युअल तरिकाले प्रतिलिपि गर्न सकिदैन। त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् जुन प्रयोगकर्ताले वेबसाइट सामग्री स्वचालित रूपमा स्क्र्याप गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ।
कसैले सोच्न सक्दछ कि कुन डाटालाई स्क्र्याप गर्ने उत्तम विधि हो। अनिवार्य रूपमा, व्यक्तिहरूले विशिष्ट यूआरएलहरूको सूची प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दछ जुन सामग्रीबाट हटाउनुपर्दछ। अधिकांश वेबसाइट स्कार्पिering उपकरणहरू क्रलरहरू हुन् जसले वेबसाइट जानकारी स collect्कलन गर्न खोज्छन्। जब तपाईं यी वेब क्रॉलरहरूलाई वेबसाइटहरूको सूचीका साथ उनीहरूलाई स्क्र्याप गर्न "फिड" गर्नुहुन्छ, तपाईं उत्कृष्ट परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ! केहि मुश्किल अवस्थामा, वेबमास्टर्सले अन्य सर्वरहरूमा उनीहरूको बट्सलाई होस्ट गर्छन। तपाईंले यी वेब आदेशहरू मध्ये केही स्वचालित गर्न तेस्रो-पार्टी सर्भरमा तपाईंको वेब स्क्र्यापिंग उपकरण होस्ट गर्नु आवश्यक पर्दछ।
सब भन्दा उपयोगी वेब स्क्र्यापि tools उपकरणहरू Webhose.io हो। यसको प्रयोग गरेर, तपाईं पूर्ण वेबसाइट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र अफलाईन पहुँचको लागि तपाईंको स्थानीय हार्ड ड्राइभमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ। हार्ड ड्राइवमा एक साइटले छिटो प्रतिक्रिया दिन्छ किनभने यो तपाइँको इन्टर्नेट जडान गति वा तपाइँको सर्भर ब्यान्डविथ प्रतिक्रिया मा निर्भर गर्दैन। यसबाहेक, वेब क्रॉलरहरूले दिनको लाखौं वेब पृष्ठहरू डाउनलोड गर्छन्। वेबसाइट पृष्ठहरू बचत गर्ने परम्परागत विधि धेरै ढिलो छ र बहु पृष्ठहरूको साथ साइटहरूको लागि अप्रभावी हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, तपाईं बोटहरु 'ओबामा भ्रमण' को रूप मा खोज को लागी खोजी गर्न सक्नुहुनेछ। यी उपकरणहरूले उनीहरूलाई आवश्यक सबै जानकारीहरू खोजी गर्दछन् र प्रयोगकर्तालाई धेरै समय र पैसा बचत गर्दछन्।
वेब स्क्र्यापि tools उपकरणहरूसँग उनीहरूका केहि चरम कारनामाहरूको स्वचालित विकल्प छ। उदाहरण को लागी, प्रयोगकर्ताहरु को एक स्क्र्यापिंग तालिका सेट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, यो सम्भव छ क्रॉलरहरूले केहि पूर्व-सेट अन्तरालहरूमा वेबसाइट जानकारी स collect्कलन गर्न। त्यस्ता उपकरणका प्रयोगकर्ताहरूले केहि डाउनलोड सुविधाहरू जस्तै डाउनलोड सेटि enjoyहरूको आनन्द लिन्छन्। यसैले तपाईं सजिलैसँग डाउनलोड गर्न वा डाउनलोड गर्न आवश्यक पर्ने वेबसाइटका अंशहरू सजिलै समावेश गर्न वा बहिष्कृत गर्न सक्नुहुन्छ।
वेबसाइट स्क्र्यापिंग रकेट विज्ञान होइन! केवल तपाईंलाई आवश्यक चीज भनेको सही वेब स्क्र्यापि tool उपकरण प्रयोग गर्नु हो। प्रयोगकर्ताहरूले वेबसाइटबाट संरचित डाटा प्राप्त गर्न सक्दछन् र भविष्यमा यसलाई प्रयोग गर्न यसलाई हार्ड ड्राइभमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, तपाईंसँग अन्य वेबसाइटहरूबाट समाचार लेखहरू प्राप्त गर्न र अन्य साइटहरूको लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने विकल्प छ। यो एसईओ लेखले कसरी तपाईंको समाचार स्क्र्यापिंग अनुभवलाई सकेसम्म सुखद बनाउनको लागि विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ।